Madaxweyne Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMadaxweyne Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu shir uga qaybgalay magaalada Sharmal Sheekh ee Masar.
Waxaa Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kusoo dhaweeyay Wafdiga Madaxweynaha Wasiiro, Xildhibaano iyo Mas’uuliyiin kale.
Madaxweyne Farmaajo oo Khudbad ka jeediyay Shirka Magaalada Sharma Sheekh waxa uu madasha ku soo bandhigay khayraadka ay hodonka ku tahay Soomaaliya, fursadaha maal gashi iyo kaalinta ay ka qaadan karto suuqa ganacsiga xorta ah ee Afrika ay qorshaynayso in dhidibada loo taago.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ahaa Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya, waxaana sidoo kale ay kulamo la qaateen dhigooda Wasiiradii Afrika ee Shirka qeyb galay.
XOG: Ciidamadii qaadi lahaa dagaalka uu iclaamiyay Farmaajo oo Xero ku Bahdilan
48,365 total views, 347 views today
48,365 total views, 347 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
48,437 total views, 347 views today
48,437 total views, 347 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
48,448 total views, 348 views today
48,448 total views, 348 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
48,469 total views, 347 views today
48,469 total views, 347 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
48,504 total views, 347 views today
48,504 total views, 347 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]